परम्परा र आधुनिकता को सामंजस्य (२) आधुनिकता! नौकरानी क्याफे, रोबोट रेस्टुरेन्ट, क्याप्सल होटल, कन्वेयर बेल्ट सुशी ... - Best of Japan
कोस्प्ले, जापानी केटी = एडोब स्टक
जबकि धेरै परम्परागत संस्कृतिहरू जापानमा रहन्छन्, धेरै समकालीन पप संस्कृति र सेवाहरू एक पछि अर्को जन्मेका र लोकप्रिय हुँदैछन्। जापान आएका केही विदेशी पर्यटकहरू परम्परा र समकालीन चीजहरू सँगसँगै छ भनेर छक्क पर्दछन्। यस पृष्ठमा, म तपाईलाई जापानमा आएको बेला तपाईले वास्तवमै आनन्द लिन सक्ने कुराहरुको परिचय दिनेछु।
जापानमा धेरै परम्परागत संस्कृतिहरू रहिरहँदा पनि धेरै समकालीन पप संस्कृति एक पछि अर्को जन्मेका हुन्छन्। केही विदेशी पर्यटकहरू परम्परा र समकालीन चीजहरू एक अर्कासँग मिलेर छक्क परेका छन्। यदि तपाईं टोकियो जानुहुन्छ भने, अकिहाबारा द्वारा रोक्न निश्चित हुनुहोस्। त्यहाँ जापानी पप संस्कृति चम्किरहेको छ। अकीहाबारा मप अकिहाबारा फोटाहरूको फोटो सामग्री ...
यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, तपाईंले पाउनुहुनेछ धेरै साना कारहरू छन्। यसलाई "केइ कारहरू （軽 自動 車, K-car）" भनिन्छ। जापानी कारहरु संसारभर मा निर्यात गरिएको छ, तर Kei कारहरु बिरलै निर्यात गरिएको छ। केई कारहरू खरीद गर्दा, तपाईं सामान्य कार भन्दा कम कर तिर्नुहुन्छ। त्यसो भए, भित्र ...
जापानी मानिसहरू खाजा बक्सहरू मन पराउँछन्। त्यसकारण, विभिन्न बेन्टो सुविधा स्टोर र सुपरमार्केटमा बेचिन्छन्। थप रूपमा, साना बच्चाहरूसहितको परिवारमा, यस पृष्ठमा देखाए अनुसार अभिभावकहरूले "चरबेन" बनाउँदछन्। एक charaben anime को रूपमा पात्रहरू कोर्न को लागी साइड डिश र चामल प्रयोग आमा बुबा द्वारा बनाईएको एक हस्तनिर्मित bento हो। ...
Harajuku मा किनमेल
१०० येन पसल
कोस्प्ले कार्टुन वा एनिमेसन जस्ता चरित्रको रूपमा भेस गर्ने कार्य हो। कोस्प्लेको व्युत्पत्ति जापानमा बनेको "पोशाक खेल" शब्दबाट आएको हो। भनिन्छ कि विगतमा, मानिसहरू चाडपर्वको रूपमा भेषमा थिए धेरै पहिले। यो बताइएको छ कि त्यहाँ केहि घटनाहरू थिए जहाँ क्योटोमा गीशाले कथाको पात्रको रूपमा पहिराइएका थिए र शहर वरिपरि हिडेका थिए। समकालीन cosplay यस्तो जापानी परम्परा मा आधारित हुन सक्छ।
जो मानिस cosplay रमाईलो गर्छन् cosplayers भनिन्छ। जापानमा, धेरै घटनाहरू र चाडपर्वहरू जहाँ कास्प्लेयरहरू भेला हुन्छन्। एक प्रतिनिधि घटना जुन विदेशीहरूले सजिलैसँग भाग लिन सक्दछन् कमिक मार्केट जुन टोकियोको बिग साइटमा आयोजित हुन्छ। कृपया निम्न साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> COMIC MARET को आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
टोक्योमा, cosplayers को लागी एक फोटो हल पनि छ। उदाहरण को लागी, अकिहाबरा मा Cosplay स्टूडियो CROWN छ। कृपया निम्न साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
>> Cosplay स्टूडियो CROWN को आधिकारिक साइट यहाँ छ
अकिहाबारामा त्यहाँ धेरै पसलहरू छन् जुन cosplayers को लागी लुगा बिक्री गर्छन्। कृपया तलको भिडियोमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। यदि तपाईं त्यस्ता स्टोरमा जानुभयो भने, cosplayers को रमाइलो वातावरण प्रसारित हुनेछ!
यदि तपाईं टोकियोको अकिहाबारा जानुभयो भने, तपाईं सजिलैसँग cosplayers पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
अकीहाबारामा विदेशी पर्यटकहरू बीच दासी क्याफेहरू लोकप्रिय छन्। स्टाफले तपाईंलाई दासीको भेष बदल्नेछ र तपाईंलाई भेट्नेछ। अकिहाबारामा त्यस्ता धेरै दासी क्याफेहरू छन्। विदेशीहरूको लागि लोकप्रिय क्याफेको रूपमा, अर्को दुई स्टोरहरू प्रसिद्ध छन्। हो, धेरै महिला ग्राहकहरु आउँदैछन्।
>> अकिबाजेट्टाको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
>> @ होम क्याफेको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
रोबोट रेस्टुरेन्ट टोकियोको काबुकिचोमा अवस्थित छ। जे होस् यसलाई "रोबोट" नाम दिइएको छ, रोबोट नायक होईन। नर्तकहरु रोबोट संगै उनीहरुका कार्यक्रमहरु देखाउँछन्। जापानका परम्परागत जापानी ड्रमहरू देखाईरहेका छन् आदि। जे भए पनि, त्यहाँ धेरै प्रदर्शनहरू छन् जुन रोबोटसँग सम्बन्धित छैन।
यद्यपि, विदेशीहरूले यसको आनन्द लिन सक्दछ, शोहरूमा जापानी तत्वहरू समावेश छन्। यो पसल विदेशमा धेरै लोकप्रिय छ। यस स्टोरमा, परम्परागत जापानी चीजहरू र आधुनिक चीजहरू फ्यूज गरियो। प्राय भ्रमण गर्ने ग्राहकहरू विदेशीहरू हुन्। सबै कार्यक्रमहरू अंग्रेजीमा आयोजित हुनेछन्। जे भए पनि यो चम्किलो छ।
जहाँसम्म यसलाई "रेस्टुरेन्ट" नाम दिइएको छ, त्यहाँ धेरै स्वादिष्ट खाना छैन, त्यसैले यस पसलमा प्रवेश गर्नु अघि वा पछाडि फरक रेस्टुरेन्टमा खाना खानु राम्रो हुन्छ।
यो पसल धेरै भीड छ, कृपया अग्रिम आरक्षण गर्नुहोस्।
>> रोबोट रेस्टुरेन्टको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
यदि तपाईं जापानको टुप्पोमा रोबोटहरू हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं तल इमर्जिंग साइन्स र ईन्नोभेसनको राष्ट्रिय संग्रहालयमा जानुहुन्छ। बच्चाहरू र वयस्कहरू यस संग्रहालयमा रमाउन सकिन्छ। यहाँ उत्कृष्ट गाईडहरू छन्। अघि, मैले गाईड मध्ये एकलाई अन्तर्वार्ता लिएको छु। सजिलैसँग बुझ्ने तरिकाले मानिसहरूलाई अत्याधिक विज्ञानमा पुग्न उनीहरूको उत्साहले म प्रभावित भएँ।
>> उदीयमान विज्ञान र नवीनता (मिरिकन) को राष्ट्रीय संग्रहालयको आधिकारिक वेबसाइट यहाँ छ
मारीकार एक सार्वजनिक-सडकमा चल्ने ग-कार्ट हो। यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ, तपाइँको मनपर्दो पोखरी उधारो लिनुहोस्, तपाइँ ह्यान्डललाई भावनाको साथ बुझ्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि तपाइँ एक खेल वा एनिमेसको चरित्र हुनुहुन्छ।
मारीकार ndण दिने कम्पनीहरूले पछिल्ला वर्षहरुमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं ट्रीयो, ओसाका, क्योटो, सप्पोरो र यस्तै अन्य शहरहरूमा मारीकार ड्राइभको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। शहर भएर जाने पैदलयात्रीहरू निश्चित रूपमा तपाईंको कार्ट र पोशाकबाट अचम्मित हुनेछन्। तपाईंले माथिको यूट्यूब भिडियोहरू तुलना गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं मारीकारबाट देख्नुहुने दृश्यहरू दिन र रात बिच फरक हुन्छ। दिनको समयमा वा साँझ तपाई कुन समय चल्न चाहानुहुन्छ?
जब ड्राइभिंग, तपाईं एक विशेष भिडियो क्यामेरा उधार लिन सक्नुहुन्छ कि तपाईं र तपाईंको वरिपरिको दृश्य शूट हुन्छ।
यो सेवा प्रयोग गर्नको लागि तपाईलाई अग्रिम आरक्षण चाहिन्छ। तपाईंले एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभर इजाजतपत्र र स्टोरमा तपाईंको देशको इजाजतपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
मारिकारलाई केइ कार (सानो गाडीको जापानी कोटी) को रूपमा लिइन्छ, हेलमेट अनिवार्य छैन। यद्यपि शीर्ष गति लगभग kilometers० किलोमिटर प्रति घण्टा भएको हुनाले म हेलमेट लिनलाई कडा सिफारिश गर्दछु। टोकियो जस्ता सडकमा थुप्रै कारहरू दौडिरहेका छन्। त्यहाँ धेरै यात्रीहरू पनि छन्, त्यसैले ड्राइभ गर्दा सावधान हुनुहोस्।
२०१ 2017 मा, निन्टेन्डोले यस गो-कार्टलाई संचालन गर्ने एक कम्पनीको लागि प्रतिलिपि अधिकार उल्ल etc.्घन आदि विरूद्ध मुद्दा दायर गर्यो। वास्तवमा, मारीकार्‌ ठ्याक्कै मारियो कार्ट जस्तो देखिन्छ, र यदि तपाईं पोशाक लगाउनुहुन्छ भने, तपाईंले मारियोमा परिवर्तन गर्नुभएको मूड महसुस गर्नुहुनेछ। सेप्टेम्बर २०१ In मा, निन्टेन्डोले त्यो सूट जित्यो। यस कारणका लागि, मलाई थाहा छैन मारीकारको सेवा कति लामो समय सम्म रहनेछ। यदि तपाईं अग्रिम बुकिंग गर्नुभए पनि, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि जापानको लागि प्रस्थान गर्नु अघि यो सेवा चालु छ वा छैन।
हालसालै, यस पृष्ठमा जस्तो कार्टहरू अक्सर टोकियोमा देखा पर्दछ। यो नयाँ कार भाडा सेवा हो जुन मुख्य रूपमा विदेशी पाहुनाहरूको लागि सुरू भयो। विदेशी पर्यटकहरू "सुपर मारियो ब्रदर्स" खेलमा चरित्रको रूपमा पहिरिएका थिए। शिबुया र अकिहाबारा जस्ता सार्वजनिक सडकहरूमा चल्नुहोस्। हामी जापानीहरु धेरै ...
>> मारीकारको आधिकारिक साइट यहाँ छ
Harajuku एक फेशनेबल सडक हो धेरै पसलहरू बेच्ने चीजहरूको बिक्री गर्दछ जुन किशोर किशोरीहरूले मनपराउँदछन्। यो १ स्टेशन टोक्योको शिबुया स्टेशनबाट JR ट्रेन द्वारा छ। उदाहरण को लागी, प्यारा र सस्तो कपडा, सामान, प्रसाधन सामग्री आदि बेचिन्छ। स्वादिष्ट आइस क्रिम र क्रेपहरू बेचिन्छ, र जापानी केटीहरू जो हाराजुुकू आएका थिए उनीहरूलाई खाँदा यस सडकमा हिंड्न मन पराउँछन्।
यदि तपाईंलाई यी स्टाइलिश सडकहरू मनपर्दछ भने, कृपया त्यहाँ जानुहोस्। म पक्का छु कि तपाईंले जापानी केटीहरूको पप संस्कृति अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले जापानको १०० येन पसल सुन्नुभएको छ? जापान मा धेरै 100 येन पसलहरु छन्। सामान्यतया, यी स्टोरहरूमा बेचेको प्रत्येक वस्तु १०० येन हो (उपभोग कर थप गरिनेछ)।
१०० येन पसलका सामानहरू विदेशबाट आएका पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय छन्। किनकि १०० येन पसलहरूको लागि, यो सस्तो मात्र छैन। त्यहाँ धेरै धेरै राम्रा आईटमहरू र उपयोगी आईटमहरू छन्। त्यहाँ धेरै जापानी वस्तुहरू छन् जुन स्मृति चिन्हका लागि उपयुक्त छन्।
प्रसिद्ध १०० येन पसलहरू, डेइसो, क्यान डो, सेरिया उल्लेख गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा, म १०० येन पसलहरू मन पराउँछु, मैले १०० येन सामानको सुविधा लेख लेखेको थिए जुन मैले धेरै पटक सिफारिस गरेको थिएँ। कस्तो प्रकारको १०० येन सामानहरू म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछ तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। जे होस्, यदि तपाइँ आफ्नो मुटुको सामग्रीको १०० येन शपमा किनमेल गर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाइँलाई किन्शिचो, टोकियोको डेइसो जान सिफारिस गर्दछु। यो स्टोर निम्न भिडियो मा चित्रित छ। डेइसो देश भर मा अवस्थित छ, तर किन्सिचोको स्टोर अत्यधिक फराकिलो छ, र सबै कुरा डेसोको सामानको लागि बेचिन्छ। धेरै विदेशीहरू पसलमा आउँदैछन्।
Depachika भनेको डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूको खाना कुना हो। जापानी डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा खाना कुना बेसमेंटको फ्लोरमा हुन्छ (जसलाई जापानीमा "चिका" भनिन्छ)। किनभने यो डिपार्टमेन्ट स्टोरको "चिका" मा हुन्छ, यसलाई "Depachika" भनिन्छ।
डेपाचिकामा बेचेका खाद्य पदार्थहरू सुपरमार्केटहरू र सुविधा स्टोरहरू भन्दा उच्च गुणस्तरका हुन्छन्। तरकारीहरू, फलफूल, माछा, मासु, मिठाई .... धेरै जापान प्रतिनिधित्व गर्ने खाना बेचिन्छ।
सबै खाद्य पदार्थहरू सुन्दर ढ package्गले प्याकेज गरिएको छ, त्यसैले हेर्नु रमाईलो छ। धेरै राम्रा गन्धहरू बगिरहेको छन्, त्यसैले पक्कै तपाईं धेरै खाना किन्न चाहानुहुन्छ।
त्यहाँ Dapachika मा बेचेको धेरै राम्रो बेन्टो बक्सहरू छन्। यदि तपाईं टोकियो स्टेशनबाट बुलेट ट्रेन सवारीमा जानुहुन्छ र कतै यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म तपाईंलाई शिन्कन्सेनमा चढ्नु भन्दा पहिले टोकियो स्टेशनको छेउमा दाइमारू टोकियो स्टोरको डेपाचिकामा बेन्टो बक्सहरू किन्न सिफारिस गर्दछु। बेन्टो बक्स एट अल छनौट गर्दा रमाइलो मेमोरी पनि हुनेछ।
सुविधा स्टोर संयुक्त राज्य अमेरिका मा जन्म एक व्यापार शैली हो। सेभेन इलेवन पहिलो पटक अमेरिकामा सफल भए। यद्यपि सुविधाजनक स्टोरहरू जुन हाल जापान, एशिया, इत्यादिमा सञ्चालित छन्, यो अमेरिकी प्रकारका छैनन्। यी पसलहरू पसलहरूको प्रकार हो जहाँ जापानका सुपरमार्केटहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाका कम्पनीहरूसँग टाई-अपहरू संयुक्त रूपमा संयुक्त राज्यमा कम्पनीहरूसँग टाई-अपहरू मिलाएर जान्ने तरिका स .्कलन गर्ने प्रबन्ध मिलाउँथे, त्यसपछि जापानी उपभोक्ताहरूलाई राम्रोसँग मिलाउनको लागि व्यवस्थित गरियो।
जापानी शैली सुविधा स्टोरहरूमा तीन प्रमुख सुविधाहरू छन्।
सबैभन्दा पहिले, त्यहाँ धेरै प्रकारका उत्पादनहरू छन्। सुविधा स्टोरहरूको औसत बिक्री फ्लोर क्षेत्र करिब १०० वर्ग मीटर छ। यो सुपरमार्केट भन्दा धेरै सानो छ। जहाँसम्म, एक स्टोर मा 100 भन्दा बढि उत्पादनहरु छन्। धेरै जसो उपभोक्ता उत्पादनहरू उपलब्ध छन्, उपभोक्ताहरू सुविधा स्टोरमा गएर उनीहरूले आफूले चाहेका सबै पाउन सक्छन्।
दोस्रो, सुविधा स्टोरहरूले प्रत्येक भण्डारको लागि विस्तृत जानकारी समात्दै छन् कि उपभोक्ताहरू कस्तो प्रकारको भ्रमणमा आउनेछन्। र तिनीहरू सटीक जानकारी रणनीति बनाउँदै छन् कि प्रत्येक पसलमा कस्तो प्रकारको सामानहरू प्रदर्शन गरिन्छन्। त्यसो भए स्टोरमा आएका व्यक्तिहरूको सन्तुष्टि स्तर धेरै नै छ। लगभग कुनै केस छैन कि कम्तिमा तपाईले चाहानु भएको आइटमहरू बेचिन्छ
मैले विगतमा लामो समयदेखि सुविधा स्टोरहरू अन्तर्वार्ता लिएको छु। सुविधा स्टोरहरूमा, तिनीहरू वास्तविक समयमा नगद दर्ता गर्न आएका ग्राहकहरूको लि the्ग र उमेर समूहका बारे जानकारी संकलन गर्दछन्। एकै समयमा उनीहरूले जानकारी लिइरहेका छन् जस्तै उनीहरूको क्षेत्रमा हिउँ परेको वा केहि दिन पछि वर्षाको उदाहरणका लागि। यदि भारी हिउँ केहि दिन पछि खस्छ भने, छिमेकी मा गृहिणीहरु हिउँ अघि धेरै दूध आदि एक धेरै किन्न, त्यसैले तिनीहरूले धेरै दूध प्रदर्शन थिए। मैले सोचें कि बिक्रीको सटीक विधि अत्यन्त जापानी हो।
तेस्रो, वस्तुको गुणस्तर धेरै उच्च छ। तिनीहरूले उपभोक्ताहरूलाई मनपर्दो उत्पादनहरू विकास गर्न जारी राख्छन्। पहिले नै लोकप्रिय आइटम को लागी, तिनीहरु को आगे सुधार गर्न को लागी जारी छ।
अवश्य पनि तिनीहरू कहिलेकाँही गल्ती गर्दछन्। एउटा प्रमुख सुविधा स्टोरमा तिनीहरूले शरद inतुमा "मत्सुताके मशरूम बेन्टो" बेचे। कम्पनीका कार्यकारीहरूले माटसुटेकलाई मन पराउँछन्, उनीहरू विश्वास गर्छन् कि यो खाजा निश्चित रूपमा ठूलो हिट हुनेछ। यद्यपि खाजा बक्स बिक्री भएन। किनभने स्टोरमा आएका युवाहरूलाई मात्सेके तर गोरूको मासु मन परेन, जेठा अधिकारीहरू भन्दा फरक छन्।
यस्तो परीक्षण र त्रुटि जारी राख्दै, बेन्टो बक्स, मिठाई, कफी, आदि सुविधा स्टोरहरूमा बेचि अधिक र अधिक स्वादिष्ट हुँदै गइरहेको छ। सबै प्रकारको घरेलु सुविधा स्टोरहरूमा, कृपया यसलाई जाँच गर्नुहोस्।
के तपाई क्याप्सुल होटेलमा बस्नुभएको छ?
क्याप्सूल होटेल, जसको नामले सts्केत गर्दछ, त्यहाँ बस्न सुविधा हो जहाँ धेरै encapsulated (boxed) बेडस्पेसहरू छन्।
प्रयोगकर्ताले यो क्याप्सुल प्रविष्ट गर्दछ र सुत्दछ। ओछ्यानसहित, बत्तीहरू र अलार्म घडीहरू, टेलिभिजन र वातानुकूलन उपकरणहरू क्याप्सुलमा प्रदान गरियो। निदाएको बखत प्रयोगकर्ताले यी अपरेट गर्न सक्दछ।
प्राय: क्याप्सूल होटेलहरूमा नुहाउने वा ठूलो सार्वजनिक स्नान सुविधा हुन्छ। भर्खरै, क्याप्सुल होटेलहरूको संख्या जसमा विलासितापूर्ण ठाउँ छ जुन तपाईं सुत्नुभन्दा पहिले आराम गर्न सक्नुहुन्छ।
क्याप्सल होटेल १ 1979। In मा ओसाकामा जन्म भएको थियो। र चाँडै यो टोकियोमा पनि निर्माण गरियो। भर्खर, विदेशबाट आएका पर्यटकहरूको संख्या बढ्दो छ, त्यसैले नयाँ होटेलहरू झन् झन् देखा पर्दै छ।
जब तपाईं "कन्वेयर बेल्ट सुशी" पसलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईले दृश्य देख्नुहुनेछ कि बेल्ट कन्वेयर कउन्टरको अगाडि स्थापित छ र बर्तनहरूमा सुशी धेरै बगिरहेको छ।
सामान्य सुशी रेस्टुरेन्टमा, दिग्गज सुशी शिल्पकारहरूले ग्राहकहरूबाट अर्डर प्राप्त गर्दछन् र सुशी सिर्जना गर्दछन्। सुशी ताजा छ किनभने उनीहरूले ग्राहकहरूबाट आदेश प्राप्त गरे पछि यो बनाउँदछन्।
यसको विपरित, कन्वेयर बेल्ट सुशीको स्टोरमा स्टाफ सदस्यहरूले ग्राहकहरूको लागि स्थिर रूपमा अझ लोकप्रिय सुशी बनाउँदछन् र तिनीहरूलाई बेल्ट कन्वेयरमा राख्छन्। तिनीहरू धेरै कुशलतापूर्वक काम गर्छन् किनकि उनीहरू स्थिर रूपमा अझ सुसी बनाउँदछन्। तिनीहरू पनि ग्राहक लाई सुशी ल्याउन छैन।
विगतमा, सुशी धेरै महँगो थियो, र जापानमा पनि मानिसहरूले साधारण खाना खान असमर्थ थिए। यद्यपि, १ 1958 XNUMX मा कन्भेयर बेल्ट सुशीको स्टोर ओसाकामा पहिलो पटक खुलेको थियो। अन्तत: यस प्रकारको पसल बढ्दै गयो। यस तरिकाले, अब धेरै व्यक्तिहरूले सुशी खान सक्छन्।
मलाई लाग्छ कन्भेयर बेल्ट सुशीको स्टोरहरू अचम्मको छ। किनकि यी स्टोरहरू निरन्तर विकसित भइरहेका छन्। त्यहाँ म जापानी "Kaizen" को संस्कृति महसुस गर्दछु।
धेरै कन्वेयर बेल्ट सुशी पसलहरूमा, रोबोटले तीव्र गतिमा शारी (चामलको अंश) बनाउँदछ। भर्खरका रोबोटहरूले चामललाई पक्रे जस्तै शिल्पकारहरूले भात नरम हातले समात्छन्। यस प्रकार हामीले कन्वेयर बेल्ट सुशीको पसलमा खाएको खाना धेरै स्वादिष्ट भइरहेको छ।
थप रूपमा, कन्भेयर बेल्ट सुशीको स्टोरमा उनीहरू विभिन्न तरिकाहरू बनाउँदछन् जसले गर्दा ग्राहकहरू आनन्दित हुन सक्दछन्। उदाहरण को लागी तलको फिल्म मा प्रस्तुत गरीएको छ, केहि दुकानहरु को लागी ग्राहकहरु एक खेल को एक प्रकारको मजा लिन को लागी खाना को समयमा मोनिटर स्क्रिन मा एक खेलौना प्राप्त गर्न।
यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने तपाईंले पाउनुहुनेछ कि जापानमा त्यहाँ थुप्रै वेंडिंग मेशिनहरू छन्। भेन्डि machines मेशिनहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन तर ग्रामीण क्षेत्रका साना सहरहरूमा पनि छन्। आज, nding० लाख भन्दा बढी युनिट विकि। मेशिनहरू देशव्यापी रूपमा कार्यरत छन्।
जापानमा किन धेरै स्वचालित भेन्डि machines मेशिनहरू छन्? मैले एक पेय निर्माताको प्रभारी व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता लिएको छु जसले यस अघि धेरै वेंडिंग मेशिनहरू स्थापना गरेको छ। उनले जोड दिए कि यो किनभने जापानमा सुरक्षा राम्रो छ र भेन्डि machines मेसिनहरु विश्वास संग राख्न सम्भव छ।
जापानमा धेरै मानिसहरू राती अबेर सम्म काम गर्छन्। तिनीहरू प्राय: राती नजिकैको भेन्डि machine मेशिनमा पेय पदार्थ किन्छन्। भेन्डि machines मेशिनहरूले मध्यरात सम्म काम गर्ने व्यक्तिहरूले समर्थन गरेको भनिन्छ।
यदि घरमालिकले भेन्डि machine मेसिन सेट अप गरेमा, उसको केहि पैसा हुनेछ। भेन्डि machines मेसिन स्थापना गर्नु घर मालिकहरूका लागि राम्रो पक्ष हो। भेन्डि machines मेसिनहरूको बृद्धि हुनुको पछाडि यो कारण देखिन्छ।
यसैले जापानमा धेरै वेंडिंग मेशिनहरू स्थापना गरिएको छ। तर जापानमा, भेन्डि machines मेशिनका प्रतिद्वन्द्वीहरू छन्। तिनीहरू सुविधाजनक स्टोरहरू हुन् जुन २ hours घण्टा खुल्छन्। जापानमा सुविधा स्टोरले विभिन्न क्षेत्रहरूमा उत्पादनहरू बेच्छ। यस कारणले, भेन्डि machines मेशिनले पेय क्षेत्रमा मुख्यतया बिक्री बढायो। भेन्डि machines मेसिनहरू सुविधा स्टोरहरू भन्दा उपभोक्ताहरू नजिक छन्। भेन्डि machines मेशिनहरूले सुविधा पसलहरू भन्दा पेय पदार्थहरू सजीलो र स्वतन्त्र रूपमा किन्न सक्ने फाइदाको साथ पेय पदार्थको क्षेत्रमा उनीहरूको प्रभाव विस्तार भएको छ।
यसको विपरित, भेन्डि machines मेशिनहरूले पेय बाहेक अन्य क्षेत्रमा सुविधा स्टोरहरू धेरै जित्दैनन्। जहाँसम्म, यदि यो एक अनौंठो उत्पादन हो जुन सुविधा स्टोरहरूले बेच्दैनन्, यो बिक्रि गर्ने मेशिनहरू द्वारा पनि बेच्न सकिन्छ। यस कारणका लागि, त्यहाँ धेरै विकि machines मेशिनहरू छन् जसले अद्वितीय आईटमहरू बेच्छन्। ती वेंडिंग मेशिनहरू ध्यानपूर्वक छिर्दै आएका मानिसहरूबाट ध्यान खिच्दैछन् र विषय छिडकिरहेका छन्। मलाई लाग्छ कि माथिको दोस्रो फिल्ममा देखा पर्ने भेन्डि machines मेशिनहरू त्यस्ता प्रकारका छन्।
भेन्डि machines मेशिनहरूले रातको समयमा शहरभर कडा बत्तीहरू उत्सव गर्दैछ। मलाई लाग्छ कि भेन्डि machines मेसिनहरू सुविधाजनक स्टोरहरूको साथमा शहरहरू बनाउँदछ जुन सुत्दैन। यदि तपाईं जापान आउनुभयो भने, कृपया राती वेंडिंग मेशिनहरूमा ध्यान दिनुहोस्। मलाई लाग्छ कि एक धेरै जापानी दृश्य फैलियो।
हाल जापानमा प्राय: जसो शौचालयहरू एयरपोर्टहरू, होटेलहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, इत्यादिमा तातो पानी सफा गर्ने कार्य हुन्छ। जब तपाईं शौचालयको छेउमा बटन थिच्नुहुन्छ, तातो पानी शौचालयको भित्रीबाट आउँछ र तपाईंको बट छिटो नुहाईन्छ।
यसका अतिरिक्त, जापानी शौचालयहरु विभिन्न कार्यहरु संग सुसज्जित छन्। सर्वप्रथम, जब तपाईं नजिक आउनुहुन्छ यो ढक्कन स्वत: खुल्छ। र शौचालय सिट एक क्षण मा न्यानो हुनेछ। शौचालयले तपाईंलाई संगीत, पानी टोन आदि सुन्न दिनेछ जब तपाईं बस्नुहुन्छ। यी ध्वनिहरू बाहिर आउदैछन् भनेर निश्चित गर्नका लागि तपाईले जोड्नु भएको आवाजले तपाईको शौचालयको नजिकका व्यक्तिहरूलाई सुन्न नसक्ने कुरा हो। यदि तपाईं शौचालय सिटबाट उठ्नुभयो भने, पानी स्वचालित रूपमा बग्नेछ।
जे होस्, शौचालयमा निर्भर गर्दै, पानी बगने छैन जबसम्म तपाईं बटन थिच्नुहुन्न वा सेन्सरमा हात राख्नुहुन्न। कहिलेकाँही विदेशीहरूले थाहा पाउँदैनन् कि पानी बहाउँदैन जबसम्म तिनीहरूले सेन्सरमा हात थाम्दैनन् र तिनीहरू डराउँदछन्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि तपाईं कसरी पानी निकाल्न सक्नुहुन्छ!
तातो पानी सफा समारोह शौचालय निर्माता को धेरै कर्मचारीहरु को एकता द्वारा जन्म भएको थियो। शौचालय निर्माणकर्तामा, विकास कर्मचारीलाई सुरुमा कुनै बिचार थिएन कि कुन बिन्दुलाई तातो पानीले छरिनु पर्छ। त्यसकारण, विकास कर्मचारीहरूले घर-घरमा सोधपुछ गरे। कम्पनीका धेरै व्यक्ति वास्तवमै शौचालयमा बसेका थिए, उनीहरूका सम्बन्धित उत्तम पोइन्टहरूमा अंकहरू सेट गर्छन्, र स्टाफलाई भन्छन्। पुरुष मात्र होइन महिलाले पनि सहयोग गरे। यस तरिकाले, एक शौचालय सिर्जना गरिएको थियो जुन ठीक बिन्दुमा तातो पानी प्रयोग गर्न सक्दछ।
आज जापानी शौचालय निर्माणकर्ताहरूमा इञ्जिनियरहरूले पानी निकाल्ने उत्तम तरिका कसरी बनाउने भनेर अध्ययन गरिरहेका छन्, ताकि शौचालयको कचौरामा बग्ने पानी थोरै पनि कम गर्न सकिन्छ। शौचालयको कचौरा जसले आश्चर्यजनक रूपमा पानीको आवश्यक मात्रालाई कम गरिसकेको छ देखा पर्‍यो।
भनिन्छ संसारले भविष्यमा पानीको गम्भीर अभावको सामना गरिरहेको छ। यस कारणले गर्दा, जापानी इन्जिनियरहरू अनुसन्धानमा संलग्न छन् ताकि पानीको खपत पनि थोरै कम गर्न सकिन्छ।